समयमै ए’म्बुलेन्स न’पाउँदा फिल्म अभिनेत्री र उनको न’वजात शि’शुको मृ’त्यु – Enews Odisha
काठमान्डौ , समयमा ए’म्बुलेन्स न’पाउँदा भारत म’हाराष्ट्रको हिं’गोली जिल्लामा म’राठी फिल्मकी एक अ’भिनेत्री र उनको न’वजात शि’शुको ज्या’न गएको छ। २५ वर्षीय अ’भिनेत्री पू’जा झु’न्जरको मृ’त्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार पु’जालाई राति २ बजे प्र’सव पी’डा भएपछि त’त्काल मुम्बईको गो’रेगाँवस्थित प्रा’थमिक चि’कित्सा के’न्द्र लगिएको थियो। त्यहाँ प्र’सवको केही समयमै उनको न’वजात शि’शुको नि’धन भयो। त्यसपछि डाक्टरले आ’फन्तलाई तत्काल ४० किलोमिटर टा’ढाको हिं’गोली अस्पताल लै’जान भने।
आ’फन्तले राति धे’रैबेरसम्म ए’म्बुलेन्स खो’जे। ब’ल्लबल्ल एक नि’जी ए’म्बुलेन्सको व्य’वस्था भयो। तर अस्पताल न’पुग्दै पु’जाको नि’धन भयो। पु’जाले २ म’राठी फिल्ममा मु’ख्य भू’मिका नि’भाएकी थिइन्। ग’र्भवति भएपछि उनी केही स’मयदेखि आ’राम लि’इरहेकी थिइन्। आ’फन्तहरुले समयमै ए’म्बुलेन्स पा’एको भए पु’जाको ज्या’न ब’च्ने बताएका छन्। हिं’गोली जिल्ला मुम्बईबाट ५९० कि’लोमिटर टा’ढा पर्छ।
काठमाडौँ, कार्तिक / वर्ष पुगी सकेका भाइरल अघोरबाबाले विबाह गरे भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला । तर उनले आफ्नो जीवन संगिनी रोजेका छन ।वास्तवमा उनले विवाह भने करिब तिन महिना अगाडी गरेका हुन् तर उनले यो कुरा गोप्य राखेका थिए ।केहि महिना अगाडीको अन्तर्वार्ताहरुमा विवाहको प्रश्न गर्दा उनले चितामा मात्र मेरो विवाह हुने बताउने बाबाले विवाह गरेको खबर सुन्दा धेरै भक्तजनहरु चकित परेका छन ।
बाबाले विवाह गरेको कुरा थाहा पाएपछि उनका भक्तजनहरुले अब बाबाको लाइफ ड्यामेज भनेर पनि कमेन्ट गरेका छन । बाबाको श्रीमतीसंग सोध्दा, उनलाई पनि बाबा मन पराएको र उनको साधुपनले आकर्षित बनाएको हुदा एक भएको बताउछिन ।सदा सुन्दरीजल कुटीमा एक्लै भेटिने बाबा अब श्रीमतीको साथ भेट्न थालिएको छ । उनीहरुसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस ।
Previous Article मनिषा कोइराला बारे मुख खोलिन ऐश्वर्याले, भन्छिन- नयाँनयाँ पुरुष फेर्थिन
Next Article सावधान! तपाईंको नाममा प्यान दर्ता भएको त छैन ? (राजस्व विभागको सूचनासहित)